Orbano II - Wikipedia
Tonga tao Frantsa ny papa Orbano II mba hitory ny hanaovana krozada.
I Orbano II dia papa tamin' ny taona 1088 hatramin' ny 1099. Izy no nanambara ny hanaovana ny kroazada voalohany. Teraka tao Châtillon-sur-Marne any Frantsa tamin' ny taona 1042 izy ary ary maty tao Rôma tamin' ny taona 1099.. I Eudes de Châtillon na Odon de Lagery no anarany talohan' ny naha papa azy. Izy no papa faha-159 ao amin' ny Fiangonana katôlika rômana. Atao hoe Urbain II izy amin' ny teny frantsay, Urban II amin' ny teny anglisy, Urbano II amin' ny teny italiana ary Urbanus II amin' ny teny latina.
Nianatra tany Reims any Frantsa izy, niditra tao amin' ny mônasteran' ny Benediktinan' i Cluny. Hatramin' ny taona 1079 ka hatramin' ny 1080 dia notendren' ny papa Gregôrio VII ho kardinaly sy eveka tao Ostia (frantsay: Ostie; italiana: Ostia) any Rôma izy sy iraky ny papa (latina: legatus) tany Frantsa sy tany Alemaina tamin' ny 1079 hatramin' ny 1085 mba hanongana an'i Klemento III. Nohosorana ho papa mpandimby an' i Gregôrio VII izy tamin' ny 12 Marsa 1088, taorian' i Viktôro III (papa tamin' ny taona 1086 hatramin' ny 1087). Ny fotoana nanosorana azy ho papa dia fotoana nifanandrinan' ny Fiangonana sy ny Emperora (izay efa nandroaka an' i Gregôrio VII sy nametraka an' i Klemento III ho papa, na raha ny tena marina ho antipapa).
Nandritra ny enina taona voalohany naha papa an' i Orbano III dia noroahin' ilay antipapa Klemento III hiala an' i Rôma, nefa nahavita nanohy ny asa izay efa natombok' i Gregôrio hiadiana amin' i mpanjaka Henri IV ihany izy tamin' ny ady momba ny Fametrahana ho panjaka. Naongany i Philippe I mpanjakan' i Frantsa, izay nampody ny vadiny sady nanohana an' i Anselmo d'Aosta (frantsay: Anselme de Cantorbéry) hanoherana an' i William II mpanjakan' i Angletera (frantsay: Guillaume II d'Angleterre).
Nandritra ny naha papa azy dia nanohy sy nampandroso ny asa fanavaozana natombok' i Gregôrio izy, nefa somary nalefaka kokoa sady nanaiky fifampiraharahana kokoa raha mitaha amin' i Gregôrio. Izy koa no nitarika ny fanavaozana ny raharaham-pitsarana tao Vatikàna. Niezaka nampitsahatra ny fisaraham-bazana tamin' ny Empira Bizantina koa izy. Rehefa naiantso vonjy ny emperora bizantina Aleksisy I Kômnenôsy (frantsay: Alexis Ier Comnène) dia namporisika ny Kristiana any Andrefana hiaro ireo any Atsinanana tamin' ny ady amin' ny Torka seljokida izy.
Tamin' ny 27 Novambra 1095 dia nanao toriteny tamin' ny kônsily tao Clermont (atao hoe Clermont-Ferrand ankehitriny) izy hanambaràny ny tokony hanaovana ny kroazada voalohany.
Maty tao Rôma tamin' ny 29 Jolay 1099 i Orbano II fotoana fohy taorian' ny nameerenan'ny kroazada an' i Jerosalema ho tanànan' ny Kristiana indray (15 Jolay 1099). Nasandratry ny papa Leô XIII ho olon-tsambatra izy tamin' ny 14 Jolay 1881. Tamin' ny taona 1638 anefa dia hita tao amin' ny lasapelin' i Latran ny sary hosodoko vita tamin' ny taona 1154 izay maneho an' i Orbano II mitondra ny anaram-boninahitra hoe "olomasina". Anisan' ireo olontsambatra ao amin' ny Fiangonana katôlika i Orbano II, ary ankalazaina isaky ny 29 Jolay izy. Namorona ny vavaka lehibe ao amin' ny Vavaky ny Anjely (latina: Angelus) i Orbano mba hiovan' ny Miozolmana finoana ho amin' ny fivavahana krisriana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Orbano_II&oldid=1002054"
Voaova farany tamin'ny 8 Martsa 2021 amin'ny 08:24 ity pejy ity.